soft led display P30 Self-adhesive ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောပါးလွှာသောပွင့်လင်းမြင်သာသောရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
တီထွင်ဖန်တီးပုံသေ ဦး ဆောင် display ကို
Hyte-Led Co. , LTD
လိပ်စာ:SKW စက်မှုဇုန်, NO.2505, ရှီယန်မြို့, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့, တရုတ်
နင်: +86 13714518751
soft led display P30 Self-adhesive ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောပါးလွှာသောပွင့်လင်းမြင်သာသောရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်
ကြီးမားသောစျေး ၀ ယ်စင်တာပြတင်းပေါက်များအတွက်ပြသထားသောမျက်နှာပြင်အပြည့်ရှိဖန်သားမျက်နှာပြင်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်အသွေးစုံလင်သောစကရင်စက်ရုံဈေးကွန်ပြူတာ,မြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှု(95%) ဖန်ခွက်ကိုပူးတွဲပြီးနောက်ပင်ဖန်ခွက်ကိုမြင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
LED film မျက်နှာပြင်ဆိုတာဘာလဲ?
LED ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်သည်ရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းသောချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုသည်, သောမြင့်မားသောင့်လင်းမြင်သာ PCB စာရွက်ပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းကို fix. အထူး capping လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်, display module ကိုအနည်းဆုံးအထူ high-transmittance optical မှန်ဘီလူးအလွှာသို့ပေါင်းစည်းထားသည်, အရာသာ 1-3mm အထူသည်. တစ်စတုရန်းလျှင်အလေးချိန်သည် ၁-၃ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်, နှင့်၎င်း၏အလင်းသည်မြို့ရိုး၏ဝန် - ဆောင်သောလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, ဖန်ခွက်, မြတ်စွာဘုရား, စသည်တို့, နှင့် permeability သကဲ့သို့မြင့်မားသည် 90%, အရာအဆောက်အ ဦး ၏အသွင်အပြင်အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်. အနားယူတဲ့အခါ, ဖန်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်, အလုပ်လုပ်နေစဉ်အခြားဖြစ်ပါတယ် “မြင်ကွင်း” နယ်ပယ်, မြင့်မားသောအရောင်အသွေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ, တင်ပြထားသောပုံရိပ်သည်တောက်ပ။ လှပသည်.
1) ဖန်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး & အရွယ်အစားအတည်ပြု
2) ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် panel ကိုကပ် & လေကိုဖယ်ရှားခြင်း
3) frame ကို Fixing & ရုပ်ရှင်နှင့် HUB ဘုတ်အဖွဲ့ချိတ်ဆက်
4) control bar ပေါ်တွင်လူမီနီယံအဖုံးထားခြင်း
6) မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းမှု & အစီအစဉ်ပို့နေသည်
ရုပ်ရှင်အရွယ်အစား (L ကို× W × H ကို)
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ် / m2)
2000 (အများဆုံး 4000)
ဤနေရာတွင် & WhatsApp ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုထားခဲ့ပါ: +86 13714518751 & အီးမေးလ်: [email protected]
Led Display Poor အတွင်းပွင့်လင်းမြင်သာသော P3.91mm Led Mesh မျက်နှာပြင်ကိုကြော်ငြာခြင်းပြုလုပ်ရန်
P31.25 ရေစိုခံကြော်ငြာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကွက်ကို ဦး ဆောင်ကုလားကာမြို့ရိုးကိုပွင့်လင်း led display ကို
P15.625 ကွက်ကွက်လပ် LED display ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကာတွန်းကုလားကာနံရံဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်
P3.9mm P7.81 ကြည်လင်ပြတ်သားသော LED မီဒီယာမျက်နှာစာ Glass Glass LED Transparent LED Curtain
ပွင့်လင်း P8 P16.66 P20 P31.25 အပြင်ဘက်ကွက် LED မျက်နှာပြင် / LED ကုလားကာ display ကို
LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော ဖန်သားပြင်၏ တကယ့်တောက်ပမှု အညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော ဖန်သားပြင်၏ တကယ့်တောက်ပမှု အညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကြော်ငြာများအတွက် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏ ပြဿနာများ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကြော်ငြာများအတွက် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏ ပြဿနာများ
LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏အဓိက parameters များကိုတွက်ချက်နည်း မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏အဓိက parameters များကိုတွက်ချက်နည်း
မူပိုင်ခွင့် 2022 © Hyte Led & [email protected]